Saabuunta dharka lagu dhaqdo
Dharka dharka lagu dhaqo
Hebei Baiyun Daily Chemical Co., LTD. wuxuu kaqeybqaatay howlaha samafalka ee dhiraynta guga jaamacada Hebei Foreign Studies
Kiimikada maalinlaha ah ee Baiyun waxay kaqeyb qaadatay Carwadii 129-aad ee Canton
Kiimikada maalinlaha ah ee Baiyun waxay kaqeyb qaadatay Carwadii 129aad ee Canton Laga soo bilaabo Abriil 15 ilaa 24, Carwada 129aad ee Soo Dhoofinta iyo Dhoofinta ("Canton Fair") ayaa lagu qaban doonaa khadka tooska ah. Ku dhowaad 26000 oo bandhigeyaal ah, in ka badan 2.7 milyan oo bandhigyo iyo iibsadayaal ka socda 5 qaaradood ayaa ka qayb geli doona carwada. Hebei Baiyun Dail ...
Qubaysku ma karaahiyobaa? Sidee loo nadiifiyaa khabiirka qubeyska
Ah, kaliya ka fikirida inaan ku quusno qubeyska xumbo diiran ayaa naga dhigaya nafis. Shumaca shidida, garaacida muusikada nasteexo leh, iyo galida barkada qubeyska oo leh buug ama galaas khamri ah ayaa ah dad badan oo ay jecel yihiin is-daryeelidooda. Laakiin qubeyska runti ma karaahiyo baa? Ka fikir waxa ku saabsan:
Keebaad jeceshahay? Ma dhaqaysaa dareere ama budo la dhaqaa?
Waxaa qoray admin on 21-01-09
Dhaqida dareeraha ayaa kafiican, awooda sun-saaridda ayaa ka xoog badan, kharash badanna leh. 1. Dareeraha dhaqida badanaa waxay ka kooban tahay waxyaalaha aan ionic surfactant ahayn, oo leh awood sun-saarid sun ah, waxayna aad ugu sii dhaadhaci kartaa gudaha fiber-ka dharka si loo helo sun nadiif ah. Washi ...
Sunta dawadu ma aha qof qalaad, si kasta oo loo dhaqo saxamada ama khudaarta iyo miraha, saabuunta ma aha muhiim. Laakiin sidoo kale waxay leedahay faa'iidooyin aan la fileynin. 1 Waxay si wax ku ool ah uga saari kartaa ceeryaanta ku jirta muraayadda iyo muraayada. Qubeyska kadib, ceeryaanta muraayadda musqusha iyo ceeryaanta biyaha ee wi ...
Saabuunta dharka lagu dhaqo wali ma la isticmaali karaa ka dib markay dhacdo
Maadaama maqaarka cunuggu jilicsan yahay, waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid waxyaabaha taabanaya maqaarka ilmaha, sida dharka. Marka dharka caruurtu badanaa waxay isticmaalaan saabuunta dharka lagu dhaqo ee ilmaha ayaa ka fiican, maxaa yeelay waxaa la barbar dhigaa saabuunta guud ee dharka lagu dhaqo, waxyeelada ilmaha ka soo gaartaa way ka yaraan doontaa, sidaa darteed waa dad badan ...
Ma taqaan faraqa u dhexeeya saabuunta dharka lagu dhaqo iyo dareeraha saabuunta?
Qaybta firfircoon ee saabuunta dharka lagu dhaqo inta badan waa wax aan daciif ahayn, qaab dhismeedkeedana waxaa ku jira dhammaadka biyo-qoyan iyo dhammaadka saliidda-qoyan, taas oo dhamaadka saliidda-qoyan ay ku darsamayso wasakh, ka dibna kala saareyso dharka iyo dharka iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa jirka. Waqtiga, santuuqayaashu waxay yareeyaan xiisadda biyaha, sidaas ...
Baabuur saabuun ah oo ku jira gaarigaaga wax badan ayuu tari karaa
Saabuunta nolosheena maalinlaha ah waa baahi maalinle ah oo aad u badan, waxaa laga iibsan karaa supermarket kasta, haddii aad gaariga dhex dhigto, waxaa ku jira faa iidooyin badan. Ugu horreyntii, maalmaha roobka, soo bixi saabuunta la diyaariyey si loo xalliyo dhibaatada ceeryaanta muraayadda muraayadda, qaabka gaarka ah ayaa ah in saabuun lagu mariyo gadaal gadaal ...
Muxuu ku maydhaa saabuun iyo biyo inuu inaga ilaaliyo infekshinka COVID-19?
Sida laga soo xigtay Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) iyo hay'ado kale oo badan iyo khubaro caafimaad, sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo COVID-19 waa in si fudud loo hubiyo in gacmaha si sax ah loogu dhaqo saabuun iyo biyo xilli kasta. In kasta oo la isticmaalay saabuun iyo biyo wanaagsan shaqeeyaan waqtiyo aan tiro lahayn, sidee uga shaqeeyaan ...
Hebei Baiyun Daily Chemical Co., Ltd. oo la aasaasay 1997, waxay ku taalaa gobolka Shijiazhuang-Hebei — dhaqaalaha ugu weyn uguna firfircoon ..
Tuulada Gengzhuang, Beerta Warshadaha, Degmada Shenze, Shijiazhuang, Hebei
Hebei Baiyun Daily Chemical Co., LTD. sidoo kale...
Kiyun kiimikada maalinlaha ah ayaa kaqeyb qaatay ...